Mgbụsị akwụkwọ: njirimara, mmemme, akụrụ na curiosities | Netwọk Mgbasa Ozi
El daa Ọ bụ otu n'ime oge nke afọ nke na-enye ndị mmadụ mmetụta karịa ugwu mgbawa, nyere na e nwere ọtụtụ mgbanwe gburugburu ebe obibi na mgbanwe mgbanwe ndụ. Taa, anyị ga-ekwu maka ihe bụ isi njirimara mgbụsị akwụkwọ, oge nke afọ na-abịakwute anyị ugbu a. Ọ na-apụta maka ịnwe oge dị mkpirikpi, ụdị ọdịda nke epupụta site na osisi deciduous, nloghachi nke oyi na dobe na okpomọkụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe bụ isi njiri mara nke mgbụsị akwụkwọ.
1 Mgbụsị akwụkwọ na akụkụ nke ọ bụla nke ụwa
2 Njirimara oge mgbụsị akwụkwọ
2.1 Oge awa nke okpomọkụ na ọnọdụ okpomọkụ
2.2 Fall epupụta na-acha ọbara ọbara na agba
3 Ihe ubi na ememe n’oge mgbụsị akwụkwọ
Mgbụsị akwụkwọ na akụkụ nke ọ bụla nke ụwa
Mgbụsị akwụkwọ bụ otu n’ime oge 4 n’afọ ma na-ewere ọnọdụ n’agbata oge ọkọchị na udu mmiri. Ọ dị ka a ga - asị na ọ bụ ọnwa ole na ole nke mgbanwe nke oge ụbọchị na - ebelata, ọnọdụ okpomọkụ na - agbadata, ụfọdụ omume nke ndị dị ndụ gbanwere, wdg. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịkọwa oge mgbụsị akwụkwọ n'ụzọ dị nkenke, anyị nwere ike ikwu nke ahụ ọ bụ oge mgbanwe. Mgbanwe mgbanwe ndị a na-eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta dịgasị iche iche dị ka mmetụta nke ịgafe oge na agụụ. Eziokwu ahụ bụ na anyị si n'oge ebe ezumike na-apụkarị, njem, obere ọrụ, wdg. Ọ nwere ike inyere anyị aka inwe mmetụta nke anyị na-alaghachi n'ọnwa nke nnukwu ọrụ.
Site na afọ nke ụlọ akwụkwọ ọhụụ na nkwa iji mụọ ihe kwa ụbọchị, na-emega ahụ karịa ma ọ bụ ịmalite ọrụ ọhụụ na-akpalitekwa mmetụta ka ukwuu. N'ebe ugwu ụwa oge mgbụsị akwụkwọ na-amalite na ngwụsị Septemba wee kwụsị na ngwụsị December., na-ekwe ka oge oyi gafere na ntinye nke ekeresimesi. Oge a na-amalite na mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ wee kwụsị na Oge oyi.
N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ n’ịga n’akụkụ ndịda ndịda, anyị na-ahụ ọdịda ahụ na-ewere ọnọdụ site n’izu ụka ikpeazu nke Machị rue izu ikpeazụ nke ọnwa Juun. N’akụkụ nke ọzọ nke ụwa, ọ bụrụ n’anyị gaa n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, oge a nke afọ na-amalite n’izu nke abụọ nke Ọgọstụ ma kwụsị n’izu mbụ nke Nọvemba. Dabere na mpaghara ebe anyị nọ, enwere ụfọdụ ọdịnala na ememme ndị a na-eme n'oge a.
Ọ bụ oge ebe okpomọkụ na-ada ma ọ nwere obere oge ma e jiri ya tụnyere oge ndị ọzọ.
Njirimara oge mgbụsị akwụkwọ
Anyị ga-enyocha ihe bụ isi njirimara oge mgbụsị akwụkwọ yana otu ha siri dị mkpa.
Oge awa nke okpomọkụ na ọnọdụ okpomọkụ
Ọ bụrụ na anyị nyochaa ụbọchị mbụ nke mgbụsị akwụkwọ anyị maara na ọ na-amalite na equinox ya. A na-ahụkarị equinox mgbụsị akwụkwọ site na ịnwe otu ụdị awa dịka n'abalị. Anyị nwere ike ikwu na ọkụ nwere awa iri na abụọ na awa iri na abụọ nke ọchịchịrị. Nke a na - eme n'ihi anyanwụ nke kwekọrọ na etiti ụwa. Site n'ụbọchị taa nke equinox gwụ, ọ bụ oge nke ụbọchị na-ebelata ma abalị na-agbatị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-enwewanye awa ọchịchịrị na awa ole na ole karịa.
N'ihi nke a na ngbanwe ogo nke ụzarị anyanwụ n'elu ụwa, ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ na-agbadata nke ukwuu. Oge mgbụsị akwụkwọ na-abụkarị ndị a ma ama ka ha na-abata tinyere ụfọdụ ego ndị na-ajụ oyi. -Eme ka-abịa site na okpomọkụ ebe ọ bụ a nnọọ obi ụtọ okpomọkụ ọbụna n'abalị, ọ na-ama amalite ajụkwa n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Fall epupụta na-acha ọbara ọbara na agba
Ọ bụ otu n'ime njirimara kachasị mma n'oge a n'afọ. Osisi deciduous na-ebelata site na ibelata chlorophyll ruo mgbe ha amalite ịcha edo edo na aja aja. Akwụkwọ ndị a na-amalite ịda ma na-ekpuchi ụkwụ nke osisi iji ghọọ ike nke mgbọrọgwụ ga-eri iji lekọta onwe ha n'oge ọnwa oyi. Ahịhịa ndị a dara n'ala na-abụ ihe a maara dị ka ahịhịa ala ma ọ bụ nke rụrụ arụ na-eme ka ihe dị ndụ na-arụ ọrụ.
Anyị maara na n’oge oyi enwere nri ole na ole, ya mere osisi ga-achọ nri niile o nwere ike. Na usoro agba, anyị na-ahụ otu agba agba agba site n’oge mgbụsị akwụkwọ dị oke mma. E nwere agba sitere na ocher, odo, ọbara ọbara, aja aja na odo. Ngwakọta nke agba a na-achịkwa iji jikọta na mbara ala nke ọtụtụ ụwa. Ma ọ bụ na epupụta nke osisi na-amalite nwere shades n'etiti odo na oroma na ha pụrụ iche ink.
Ihe ubi na ememe n’oge mgbụsị akwụkwọ
N'oge nke afọ a anyị nwere n'oge eke nke pọmigranet na mkpụrụ vaịn. Ọ bụkwa oge kachasị mma maka mkpụrụ osisi ụfọdụ dị ka oroma, ị hụrụ, apụl, tangerines, avocados, mkpụrụ osisi grape na ụfọdụ mkpụrụ. Ọ bụrụ na anyị gaa n'ọhịa akwụkwọ nri, na ọdịda ọtụtụ atịchok, kọlịflawa, skwọsh, zukini, eggplant na kabeeji toro. A na-achọta ihe ọkụkụ a niile n'afọ, mana n'oge a ọ kacha mma. Mgbe anyị na-ekwu maka ụzọ okike, anyị na-ekwu na anyị agaghị eji ụdị fatịlaịza ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma dị ka ahịhịa griinụ.
Otu n'ime ihe ndị a ma ama maka oge a n'afọ bụ ọka na sunflower. Ọ bụrụ n’anyị gaa na ngalaba mmemme ahụ, anyị ga-ahụ na ọ bụ oge a na-eme ya n’ọnwa dị iche iche n’afọ dịka ọnọdụ ebe ahụ dị. Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ezumike kacha mara amara bụ nke ndị China na-eme ememme ọnwa. Ihe omume a ha nwere ekele maka owuwe ihe ubi gara nke ọma ha nwere n'oge ọkọchị. E nwekwara ụbọchị ọzọ banyere ihe ubi ma ọ bụ Ekele. Ọ bụ emume a na-eme na Mee nke ikpeazụ nke Nọvemba ma a na-enwe ekele maka afọ ọ bụla, na-esonyere ya na oriri nke toki toro eto bụ protagonist.
Ọzọ nke ememe ndị na-agbasawanye na ụwa na nke na-ewere ọnọdụ na mgbụsị akwụkwọ bụ Halloween. Ọ na-eme na Ọktọba 31 ma metụta ọdịbendị Celtic. N’ụbọchị ezumike a, onye ahụ na-eji ejiji, ụmụ ya ga na-agagharị n ’ụlọ ha na-arịọ ihe na-atọ ụtọ na njakịrị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere njirimara ndị isi nke mgbụsị akwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Nda